Uyigcina njani i-URL kwi-Mac's Dock | Ndisuka mac
Izinketho esinazo kwi-Mac ukugcina iphepha lewebhu okanye idilesi ethile zininzi. Kule meko into esiya kuyibona liqhinga elincinci elisivumayo ukuba siligcine kwi-Mac Dock yethu, ngaphandle kwenguqulelo ye-macOS esikuyo, iphepha lewebhu okanye ikhonkco ngqo ngonqakrazo olunye.
Kungenzeka ukuba uninzi lwakho sele lubazi ubukho beli khetho kwi-macOS, kodwa ngokuqinisekileyo abanye abaninzi bebengayazi le "tip" ngoko ke namhlanje siza kubona indlela yokugcina i-URL kwi-Mac's Dock ngendlela elula, ekhawulezayo nesebenzayo.
Ngokucacileyo kukho ukhetho lwe yongeza iphepha kwiintandokazi ngokucinezela uphawu Evela kwi-bar ye-URL, kodwa le yinto eyaziwayo sithi sonke okanye phantse sonke. Emva koko sinako tsala ngokuthe ngqo ithebhu kwindawo oyithandayo kwi-Safari kwaye ngalo lonke ixesha sivula isikhangeli sihlala kwicala lasekhohlo, silungisiwe, xa silifuna. Kodwa ngeli xesha into esiza kuyibonisa yenye indlela elula kwaye ekhawulezayo yokonga i-URL kwi-Mac.
Ungabona kumfanekiso ongentla kokubanjwa kweDock ekulula kuyo urhuqa i-url kule nto iba likhonkco ngqo kwiqela lethu. Ukongeza, ngokuzenzekelayo iba yi-icon ekwimo yebhola yehlabathi eya kusisa kwikhonkco ngonqakrazo olunye. Ikhonkco kufuneka lisiwe kwicala lasekunene ledokodo ukuze ligcinwe, kwaye kuyinyani ukuba xa sigcina ngaphezulu kwesinye sinokuyibhida i-icon, kuba kuzo zonke iimeko iyafana.
Esi sisisombululo esikhawulezayo sokugcina ikhonkco kwiwebhusayithi okanye efanayo, akukho meko akukho mfuneko yokuba ibe yindawo yokugcina izintandokazi zemihla ngemihla kuba besizalisa idokethi "ngeebhola zehlabathi" kwaye akuyomfuneko. Kodwa iyasinceda ngokugqibeleleyo iimeko apho sifuna ukugcina ikhonkco lokufika ngexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyigcina njani i-URL kwi-Mac's Dock
Enkosi. Isebenza ngokutsala kwi-desktop.
Gcina ezi datha engqondweni ukuba uza kuthenga i-Apple Watch yale Khrisimesi